समुदायमा तीन लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदै – Rajya TV
समुदायमा तीन लाख जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदै
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क परीक्षण गर्ने तयारी
काठमाडौँ,२० पुस ।
समुदायमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित पत्ता लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरबाट झन्डै तीन लाख जनाको नमुना संकलन गरी निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएको छ ।
सक्रिय संक्रमितको पहिचान नहुँदा समुदायमा थप संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले समुदायमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने योजना अगाडी सारेको हो ।
मृत्युदर घटाउँदै सक्रिय संक्रमितको पहिचान गरी रोग फैलिनबाट जोगाउन एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ लाख ९४ हजार जनाको स्वाब लिएर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने योजना ईडीसीडीले जनाएको छ ।
परीक्षण गर्न आवश्यक किटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४६ हजार, प्रदेश १ मा २६ हजार, प्रदेश २ मा ४८ हजार, वाग्मती प्रदेशमा ३२ हजार (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक), गण्डकी प्रदेशमा ४६ हजार, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ हजार जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागिएको ईडीसीडीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ६४ हजार जनाको परीक्षण हुनेछ । पीसीआर परीक्षण गर्दा बढी खर्च हुने र नतिजा पनि ढिला आउने भएपछि सरकारले टोलटोलमा गएर कोरोना संक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाउन लागेको हो ।
ईडीसीडीले यसअघि काठमाडौंमा १ हजार ४ सय ४५ जनाको स्वाब एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरेकोमा १ सय १५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो ।
एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाको पीसीआर गर्दा एक जनाको मात्रै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । ‘एन्टिजेन विधि विश्वसनीय र छिटो रिजल्ट दिने भएकाले उपयुक्त मानिन्छ,’ डा. पाण्डेले भन्नुभयोे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समुदायमा कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन एन्टिजेन विधिको छुट्टै मापदण्डसमेत बनाइसकेको छ ।
सक्रिय संक्रमित पत्ता लगाउन नेपालमा दुई विधि स्वीकृत छन्, पहिलो पीसीआर र दोस्रो एन्टिजेन परीक्षण । समुदायमा सक्रिय कोरोना संक्रमित भए पनि आफैं परीक्षण गर्न नआउने र आए पनि ढिला आउँदा समुदायमा थप जोखिम बढेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
‘गम्भीर भइसकेपछि अस्पताल आउँदा, समुदायका धेरैलाई संक्रमण सरिसकेको तथा बिरामीकै स्वास्थ्यलाई पनि जोखिम हुन्छ,’ भाइरोलोजिस्टसमेत रहेका डा. पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यस्तो समस्या कम गर्न पनि परीक्षण बढाउन लागेका हौं ।’ विज्ञका अनुसार लक्षण देखिएको ५ देखि ७ दिनभित्र भाइरस लोड सबैभन्दा धेरै हुन्छ । यही अवधिमा संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ । यसअघि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेजस्तो नहुँदा समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ ।
पीसीआर परीक्षण गर्न जस्तै एन्टिजेन परीक्षणका लागि पनि नाकबाट स्वाब निकालिन्छ । स्वाबलाई बफरमा मिसाएर टेस्ट किटमा दुई थोपा राखिन्छ । बफरले भाइरसलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ । किटमा राखेको आधा घण्टापछि रिपोर्ट थाहा पाउन सकिन्छ ।
स्वाब राखेको किटमा एउटा धर्को देखिए कोरोना नेगेटिभ र दुईवटा धर्को देखिए पोजिटिभ भएको मानिन्छ । टेस्ट किटमा ‘आर’ र ‘टी’ लेखिएको हुन्छ । ‘टी’ मा धर्को देखिए कोरोना पोजिटिभ भएको प्रमाणित हुन्छ भने ‘आर’ मा धर्को देखिए नेगेटिभ मानिन्छ । कुनै पनि लाइनमा देखिएन भने पुनः स्वाब लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।